कसरी कभरेज रिपोर्टको साथ तपाईंको साइटलाई अनुक्रमणिकामा Google प्राप्त गर्ने - Semalt जवाफ जान्छ
यो तपाईको खोजी कन्सोल सूचकांक कभरेज रिपोर्टमा गहिरो डुबुल्डी लिने समय हो यो बुझ्नको लागि हामी कसरी गुगल लाई तपाईंको साइट छिटो क्रल गर्न र अनुक्रमणिकामा ल्याउन सक्छौं। Semalt मा, हामीसँग धेरै पेशेवर टेक्निकल एसईओ कर्मचारीहरू छन्, र तिनीहरू सबै गुगल खोजी कन्सोल सूचकांक कभरेज रिपोर्ट प्रयोग गरेर कुराकानी गरिरहेका छन्।
यदि तपाईंसँग टेक्निकल एसईओ "विशेषज्ञ" छ जसले यस उपकरणलाई प्रयोग गर्दैन वा बुझ्दैन, नयाँ पाउनुहोस्। GSCIC रिपोर्टले यसको एक गहन बुझाइ प्रदान गर्‍यो:
तपाईको वेबसाइटमा कुन यूआरएलहरू गुगल द्वारा क्रल गरिएको छ र गुगलले अनुक्रमित गरेको छ, र कुन यूआरएलहरू अझै क्रल गर्न बाँकी छैन।
यसले यो पनि बुझाउँदछ कि किन खोज इञ्जिनले यो URL लाई क्रल गर्दछ वा गर्दैन।
रिपोर्ट अपेक्षाकृत सरल देखिन्छ किनकि यसले ट्राफिक सals्केत रंग योजना प्रयोग गर्दछ यसको परिणामहरू प्रतिनिधित्व गर्न।
रातो बत्ती (त्रुटि): यसले पृष्ठ सूचकांक गरिएको छैन भनेर देखाउँदछ।
पहेंलो (एक चेतावनी संग मान्य): यसले केहि समस्याहरू फिक्सिंग आवश्यक हुन सक्छ कि स indicates्केत गर्दछ। यदि तपाईंसँग समय छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। जे होस्, ती आलोचनात्मक छैनन्, र पृष्ठ अनुक्रमणिका हुन सक्छ।
हरियो (मान्य): यसले भन्छ सबै ठीक छ, र तपाईंको पृष्ठ अनुक्रमित गरिएको छ।
एउटा अर्को परिणाम ठूला खैरो क्षेत्र हो, जुन हटाइएको छ।
हामी अगाडी पढ्ने क्रममा, हामी बुझ्छौं कि सडक नियम Googlish भाषामा लेखिएको देखिन्छ। जे होस्, हामी अनुक्रमणिकामा स्थिति प्रकारहरू अनुवाद गर्न सक्दछौं र हाम्रो जैविक प्रदर्शनलाई ड्राइभ गर्न सक्दछौं।
अनुक्रमणिका कभरेज रिपोर्टमा एसईओलाई असर पार्ने मुद्दाहरू
यहाँको कुञ्जी भनेको यो सुनिश्चित गर्न हो कि तपाईंले त्रुटिहरूमा मात्र ध्यान दिनुहुन्न। अधिक अक्सर नभई, महत्त्वपूर्ण एसईओ जीतहरू माथि उल्लेखित खैरो क्षेत्रमा गाडिनेछ। यहाँ केहि अनुक्रमणिका कभरेज रिपोर्ट मुद्दाहरू छन् जुन एसईओको लागि वास्तविक कुरा हो। यी वस्तुहरूलाई प्राथमिकता क्रममा सूचीबद्ध गरिएको छ, त्यसैले तपाईंलाई थाहा छ कि कहाँ र कहाँ तपाईंको ध्यान सबैभन्दा बढी चाहिन्छ।
खोजिएको सामग्री हाललाई अनुक्रमणिका गरिएको छैन
यस्तो हुन्छ किनकि URL गुगललाई लिंकहरू वा XML साइटम्याप द्वारा ज्ञात छ, र यो क्रल कतारमा छ। यहाँ मुद्दा यो छ कि गुगलबोटले अझै URL क्रल गर्न सकेको छैन। यसले संकेत गर्दछ कि त्यहाँ क्रल बजेट मुद्दा छ।
हामी कसरी यसलाई ठीक गर्न सक्छौं? यदि त्यहाँ केहि पृष्ठहरू छन् जुन यो कोटीमा पर्दछ भने हामी मैन्युअल्ली गुगल सर्च कन्सोलमा यूआरएल (हरू) पेश गरेर क्रल ट्रिगर गर्न सक्दछौं। यदि त्यहाँ यूआरएलको महत्त्वपूर्ण संख्या छ भने, हामी तपाईंको वेबसाइटको वास्तुकलाको दीर्घकालीन फिक्समा बढी समय लगाउनेछौं। यसले साइट वर्गीकरण, यूआरएल संरचना, र आन्तरिक लिंक संरचना समावेश गर्दछ। यो गर्नाले तपाइँको क्रोल बजेट समस्याहरू उनीहरूका स्रोतहरूबाट हल गर्दछ।
क्रल गरिएको - हाल अनुक्रमित छैन
कहिलेकाँही, गुगलबोटले यूआरएल क्रल गर्नेछ र फेला पार्दछ कि यसको सामग्री यसको अनुक्रमणिकामा समावेश गर्न योग्य छैन। यो गुणस्तर सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै पुरानो सामग्री, पातलो वा अप्रासंगिक सामग्री, ढोका मार्ग अग्रणी पृष्ठहरू, वा प्रयोगकर्ता-उत्पन्न स्प्यामको कारणले सामान्य हो। यदि तपाइँको सामग्री योग्य मानिन्छ, तर यो अनुक्रमित छैन, संभावना छ कि समस्या रेन्डरिंगको परिणामको रूपमा हो।
हामी कसरी यसलाई ठीक गर्न सक्छौं? द्रुत समाधान तपाईका पृष्ठहरूका सामग्री समीक्षा गर्नका लागि हो। जब तपाईं Googlebot के सोच्छन् बुझ्नुहुन्छ, तपाईंको पृष्ठको सामग्री अब अनुक्रमणिका हुनको लागि पर्याप्त मूल्यवान छ। त्यसोभए पृष्ठमा तपाइँको वेबसाइटमा अवस्थित हुनु पर्छ कि हुँदैन भनेर तपाइँ बाहिर आउँछन्।
मान्नुहोस् कि वेबपृष्ठ तपाइँको वेबसाइट को लागी उपयोगी छैन, 301 0r 410, URL। यदि यो महत्वपूर्ण छ भने, पृष्ठमा सामग्री परिमार्जन गर्नुहोस् र एक गैर अनुक्रमणिका ट्याग थप्नुहोस् जब सम्म तपाईं मुद्दा समाधान गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईंसँग एक URL छ जुन प्यारामिटर मोडेलमा आधारित छ, तपाईं पृष्ठलाई क्र्याme्कन हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ केही अभ्यास प्यारामिटर ह्यान्डलिंग टेक्निकको प्रयोग गरेर।
जब सामग्री स्वीकार्य गुणवत्ताको जस्तो देखिन्छ, जाभास्क्रिप्ट बिना यो कसरी रेन्डर गर्दछ जाँच गर्नुहोस्। गुगलले जाभास्क्रिप्ट जेनेरेट गरिएको सामग्री अनुक्रमणिका गर्न सक्दछ, तर यो HTML अनुक्रमणिका भन्दा जटिल छ। त्यो किनभने जाभास्क्रिप्टसँग अनुक्रमणिका दुई तरंगहरू छन्। पहिलो तरंग अनुक्रमणिका त्यो सर्वरबाट प्रारम्भिक HTML मा आधारित पृष्ठ, र तपाईं पृष्ठ स्रोत हेर्न दायाँ क्लिक गरेर यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ।
दोस्रो अनुक्रमणिका DOM मा आधारित छ। यसले दुबै HTML र ग्राहक-साइडबाट रेन्डर गरिएको जाभास्क्रिप्ट समावेश गर्दछ। तपाईले यो देख्नु हुनेछ जब तपाई दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र निरीक्षण गर्नुहोस्।
जाभास्क्रिप्ट अनुक्रमणिकाको साथ प्रमुख चुनौती अनुक्रमणिकाको दोस्रो तरंगमा देखा पर्दछ, जुन सीमित छ जब सम्म गुगलले रेन्डरिंग स्रोतहरू उपलब्ध गर्दछ। यसैले जाभास्क्रिप्ट निर्भर सामग्री अनुक्रमणिका HTML सामग्रीको भन्दा बढी लिन्छ। जाभास्क्रिप्टलाई अनुक्रमणिका गर्नको लागि क्रल गरिएको समयदेखि यसले केही हप्ता सम्म दिनहरू कहिँ लिन सक्दछ।
यस्तो ढिलाइबाट बच्न, तपाईं सर्भर साइड रेन्डरिंग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले सामग्रीको सबै आवश्यक कम्पोनेन्टहरूलाई प्रारम्भिक HTML मा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छ। यसले तपाईंको एसईओको आलोचनात्मक तत्वहरू समावेश गर्नुपर्दछ, जस्तै पृष्ठ हेडिंगहरू, संरचित डाटा, तपाईंको मुख्य सामग्री र लिंकहरू, हेडिंग, र क्यानोनिकलहरू।
नक्कल गरिएको सामग्री प्रयोगकर्ता बिना चयन गरिएको क्यानोनिकलमा
यो तब हुन्छ जब गुगलले पृष्ठलाई नक्कल सामग्री मान्दछ, तर यो स्पष्ट क्यानोनिकलको साथ चिन्ह लगाइएको छैन। यहाँ, गुगलले निर्णय लिएको छ कि यो पृष्ठ क्यानोनिकल हुनुहुन्न, र यसैले गर्दा, यो सूचकांकबाट हटाइएको छ।
यसलाई ठीक गर्न, तपाईंले स्पष्ट क्यानोनिकलहरूलाई चिह्नित गर्न आवश्यक छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि rel=क्यानोनिकल ट्यागहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रत्येक वेबसाइटमा तपाईंको क्र्याबल URL को लागि। यसले तपाईंलाई कुन पृष्ठहरू Google द्वारा क्यानोनिकलको रूपमा चयन गरिएको छ भनेर बुझ्न सक्षम गर्दछ, हामीले गुगलको खोज कन्सोलमा URL निरीक्षण गर्न आवश्यक पर्दछ।
नक्कल गरिएको, सबमिट गरिएको URL, जुन क्यानोनिकलको रूपमा चयन गरिएको छैन
यो माथि सूचीबद्ध यस्तै अवस्थाले गर्दा भएको हो। यहाँ भिन्नता केवल यो हो कि तपाईंले विशेष रूपमा URL अनुक्रमणिकाको लागि सोध्नुभयो।
यसलाई ठीक गर्न, तपाईंले rel=क्यानोनिकल लिंक प्रयोग गरेर सही क्यानोनिकल मार्क गर्नुपर्नेछ। यो तपाइँको वेबसाइट मा प्रत्येक क्रॉल योग्य यूआरएल मा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तपाइँले तपाइँको XML साइटम्यापमा केवल प्रमाणिक पृष्ठहरू समावेश गरेको पनि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
गुगलले बिभिन्न क्यानोनिकल छनौट गर्दछ
यस अवस्थामा, तपाईंले आफ्नो rel=क्यानोनिकल लिंकहरू राख्नु भएको छ, तर गुगलले यो सुझाव र उपयुक्त फेला पार्दैन, त्यसैले यसले क्यानोनिकलको रूपमा भिन्न यूआरएल अनुक्रमणिका छनौट गर्दछ।
यसलाई ठीक गर्न, तपाईंले यूआरएल निरीक्षण गर्न आवश्यक पर्दछ कि गुगलले चयन गरेको क्यानोनिकल यूआरएल हेर्नका लागि। यदि तपाईंलाई गुगलले सही छनौट गरेको जस्तो लाग्छ भने, rel=प्रमाणिक लिंक परिवर्तन गर्नुहोस्। यदि होईन भने, तपाईंले वेबसाइट आर्किटेक्चरमा काम गर्नुपर्नेछ र नक्कल सामग्रीको मात्रा कम गर्नुपर्नेछ। तपाईंले प्रमाणित हुन चाहानु भएको पृष्ठमा तपाईंले बलियो र ranking्कि। सिग्नलहरू पठाउनु पर्छ।
सबमिट गरिएको URL फेला परेन (4०4)
पृष्ठको लागि गरिएको अनुरोध अवस्थित छैन। यसलाई ठीक गर्न, तपाईले यूआरएल सिर्जना गर्न वा तपाईंको XML साइटम्यापबाट पूर्ण रूपमा यसलाई हटाउनु पर्छ। यो समस्या XML साइटम्यापमा हाम्रो मार्गनिर्देशन पछ्याउन सजीलो सजीलो हुन सक्छ।
यहाँ, गुगल बट्सले रीडायरेक्टसँग मुद्दाहरू लिएको छ। यो प्राय: पाँच वा अधिक यूआरएलहरूको पुनःनिर्देशित श्रृंखला भएको कारणले हुन्छ, लूपहरू अत्यधिक लामो यूआरएल, वा खाली यूआरएल पुनर्निर्देशित गर्दछ।
हामी यसलाई डिबगिंग उपकरणहरू जस्तै लाइटहाउस प्रयोग गरेर यसलाई ठीक गर्न सक्छौं। स्थिति कोड उपकरण जस्तो कि httpstatus.io लाई रिडिरेक्टलाई अपेक्षितको रूपमा प्रदर्शन गर्नबाट रोकिरहेको र पहिचान भएका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं पक्का हुनुहुन्छ कि तपाईंको 1०१ रिडिरेक्टहरू सँधै अन्तिम गन्तव्यमा सीधा इशारा गर्दै छन्। यदि तपाइँलाई पुरानो पुनःनिर्देशनहरू सम्पादन गर्न आवश्यक छ भने, तिनीहरूलाई सम्पादन गर्न उत्तम हो।
सर्भर त्रुटि (5xx)
यो तब हुन्छ जब सर्भरले HT०० HTTP प्रतिक्रिया कोड वा आन्तरिक सर्भर त्रुटि कोड फिर्ता गर्दछ जब उनीहरू व्यक्तिगत पृष्ठहरू लोड गर्न असक्षम हुन्छन्। यो सर्वर मुद्दाहरूको एक विस्तृत विविधता को कारणले हुन सक्छ, तर अधिक पटक यो यो छोटो सर्भर बिच्छेदनको कारणले हुन्छ कि गुगल बोटहरू यूआरएल क्रॉल हुनबाट रोक्छ।
तपाइँ कसरी पुग्नुहुन्छ, यो आंशिक रूपमा कति पटक यो हुन्छ निर्भर गर्दछ। यदि यो धेरै लामो अवधिमा एकचोटि भयो भने चिन्ताको विषय त्यहाँ छैन। केहि समय पछि त्रुटि हट्नेछ। यदि पृष्ठ तपाईको लागि महत्वपूर्ण छ भने, तपाई गुगलबटलाई युआरएलमा अनुक्रमणिका अनुरोध गरेर त्रुटि पछि पृष्ठमा सम्झन सक्नुहुन्छ।
यदि त्रुटि पुनः फिर्ता हुँदैछ भने, तपाईंले आफ्नो ईन्जिनियरसँग बोल्नु पर्छ, टीम र होस्टिंग कम्पनीलाई उनीहरूको सेवाहरू सुधार गर्न सिकाउनुहोस्। यदि समस्या रहिरहेमा, होस्टिंग कम्पनी परिवर्तन गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्।
समग्रमा, हामी समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा समस्यालाई रोक्नमा विश्वास गर्दछौं। हाम्रो राम्रो सोच्ने वेबसाइट आर्किटेक्चर र रोबोट ह्यान्डलिंगको साथ, हामी प्रायः पूर्ण रूपमा सफा र स्पष्ट गुगल खोजी कन्सोल अनुक्रमणिका कभरेज रिपोर्टहरू उत्पादन गर्छौं। जे होस्, हामी कहिलेकाँही ग्राहकहरूलाई लिन्छौं जसले तिनीहरूको साइट अरूले निर्माण गरेका थिए, त्यसैले हामी साइटलाई स्क्र्याचबाट विकास गर्न सक्दैनौं। यस कारणका लागि, हामी यो रिपोर्ट नियमित रूपमा जाँच्दछौं र हेर्दछौं कुन हदसम्म गुगलले साइट क्रल गरेको छ र साइटलाई अनुक्रमित गरेको छ, जस पछि हामी प्रगतिमा नोटहरू लिन्छौं।
मा Semalt, हामीसँग विज्ञहरू छन् जो यहाँ तपाईंको सेवा गर्न आएका छन्। के तपाईं माथिका कुनै पनि आइटममा सम्बन्धित कुनै समस्या छ? वा तपाइँसँग SEO र साइट अनुक्रमणिका सम्बन्धित कुनै प्रश्नहरू छन्? हामी तपाईंलाई विवरणहरू इस्त्रीमा मद्दत गर्नमा बढी खुशी छौं। हाम्रो सेवाहरूले तपाइँको साइट मर्मत गर्न पनि विस्तार गर्दछ, जसमा यी मुद्दाहरूको फिक्सिंग समावेश छ।